နေစွမ်းအင် Car Air Purifier ကားရေမွှေး Air Cleaner Spin Car Air Freshener and Odor Eliminator စီးကရက်မီးခိုးအနံ့များကိုဖယ်ရှားပါ – Professional ကအလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ|ကားအပိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထောက်ပံ့
dispersing pleasant fragrance in the surroundings for 90 ရက်ပေါင်း. Compact and stylish, it fits as an aroma diffuser
အရောင်: silvery, blue, red, golden (optional)
5. ကြာမြင့်ချိန်: 1~3 working days for trial order; 4-7working days for normal order!
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, we pack our goods in neutral white boxes and brown cartons. သင်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့်ရှိပါက,
က: T / T 30% သိုက်အဖြစ်, နှင့် 70% ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီ. ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အထုပ်များ၏ဓါတ်ပုံများကိုပြပါမယ်
က: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
က: ယေဘူယျအားဖြင့်, ကြာလိမ့်မယ် 30 ရန် 60 သင့်ရဲ့ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း. တိကျသောပေးပို့အချိန်ပေါ်မူတည်သည်
က: ဟုတ်တယ်, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
က: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and
က: ဟုတ်တယ်, we have 100% test before delivery
က:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;